Imandarmedia.com.np: मनीषा कोइरालालाई भेटेर किन दंग परे रणवीर कपुर ? यस्तो छ कारण
Entertainment » मनीषा कोइरालालाई भेटेर किन दंग परे रणवीर कपुर ? यस्तो छ कारण
मनीषा कोइरालालाई भेटेर किन दंग परे रणवीर कपुर ? यस्तो छ कारण
सानैम त्यो फिल्म हेर्दा आफू मनीषाको अभिनयबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै रणवीरले अहिले उनैसँग काम गर्न पाउनुले आफूलाई खुसी तुल्याएको बताएका छन्। आफूले सम्मान गर्दै आएको कलाकारले आफ्नो फिल्म हेरेको र कामको प्रशंसा गरेकोमा रणवीर दंग छन्।
मनीषाले यसअघि रणवीरका बाबु ऋषि कपुरसँग ‘अनमोल’ भन्ने फिल्म खेलेकी थिइन्।